लिटिल स्टेप मा.वि.मा विदाई कार्यक्रम : - Googlepokhara
लिटिल स्टेप मा.वि.मा विदाई कार्यक्रम :
googlepokhara	प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र १८, २०७५ समय: १४:५६:०५
आज लिटिल स्टेप मा.वि.मा यस मा.वि.को तर्पmबाट सामेल भएका ५३ जना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापनले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी विदाई गरेको छ । परीक्षा सकिए लगायत विद्यालयको सभाहलमा आयोजित सो अनौपचारिक छोटो कार्यक्रममा विद्यालय प्रशासनको तर्पmबाट संस्थापक निर्देशक शेरबहादुर गुरुङ्ग, संस्थापक प्राचार्य पम्फा गुरुङ्ग, मा.वि. तहका सम्पूर्ण शिक्षणगण, सम्बन्धित अभिभावकवर्ग एवं विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो ।
विशेष परिकार सहितको भोजन ग्रहणपश्चात शुरु भएको विदाई कार्यक्रममा संस्थापक निर्देशक एवं संस्थापक प्राचार्य द्धयले वर्तमानमा शिक्षा भन्दा ठूलो केहि नरहेको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षानिम्ति प्रेरित गर्नुभयो । साथै विद्यालय एवं छात्रावासमा रहँदा सम्म देखाएको अनुशासन, अध्ययन प्रतिको लगनशीलता स्मरण गर्दै विद्यार्थीहरुलाई धन्यवाद् सहित सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा मायाको चिनोका रुपमा एस.ई.ई. ब्याच २०७५ अंकित फोटो पे्रmम सम्पूर्ण विद्यार्थी्हरुलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसै गरी कार्यक्रममा मा.वि. तह कोअर्डिनेटर श्री तारा प्रसाद सुवेदी एवं कक्षा शिक्षक श्री चित्रबहादुर अधिकारीले पनि शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो । विद्यार्थीको तर्पmबाट रोशन सुवेदीले आफ्नो मन्तव्य राख्दै विद्यालय प्रशासन र शिक्षक गणलाई आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद् ज्ञापन गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घोषण विद्यालय कोअर्डिनेटर श्री विनोद गिरीले गर्नुभएको थियो ।